Vanomiririra Mould Vagadziri uye vanotengesa - China Prototype Mould Fekitori
Yuanfang ndiye wako mumwe-vanorega naye nokukurumidza prototype muforoma & jekiseni Kuumbwa mabasa
China Plastic jekiseni Mould Kuita Makambani
Makambani mazhinji anopa prototype molds vasati vaenda zvakananga kune yekugadzira maitiro ezvikonzero zvakasiyana.
Aya ndiwo akadhura-emumba anowanzo kuve akasiyana neyakagadzirwa mafuru nekuti akagadzirirwa kushandiswa kwenguva pfupi chete.
Chii chinonzi Prototype Mould?
Prototype molds inowanzo kuve yakasiyana neyakagadzirwa mafuru nekuti kazhinji haigadzirirwe kushandiswa kwenguva refu. Somumwe indasitiri vatungamiriri, Yuanfang Technology ane nyanzvi vanogona kubata chero mhando chakuvhuvhu (kusanganisira prototypes), zvinopa yepamusoro anoumba panguva zvemakwikwi chaizvo mitengo.
Nei Prototype Moulds?
Sezvambotaurwa, prototype molds inoshanda basa rakasiyana pane chigadzirwa chekupedzisira, kusanganisira zvinotevera zvinangwa:
1. Chinhu chisingadhuri pre-kugadzirwa muforoma iyo inobatsira kuyedza iyo mold pamberi pekupedzisira kugadzirwa.
2. Shorter lead times kuti uve neshanduro inogona kuyedzwa, kazhinji inotora masvondo 2-4.
Prototype molds haina kuitirwa kuti ive yekupedzisira vhezheni, uye izvo zvinoreva nzira ine nhanho yekuvaka.
Iyo prototype mold haisi iyo yekupedzisira vhezheni, asi nzira yekuvaka iyo mold mumatanho. Kusiyana neyekupedzisira jekiseni muforoma, iyo prototype muforoma inogadzirwa nezvinhu zvisingadhuri, senge isina kuomeswa simbi, aluminium kana P20. Sezvo ivo vasina kusimba seyekupedzisira jekiseni muforoma, iwe haugone kuzvishandisa mune yekupedzisira chigadzirwa.
Ndeapi mabhenefiti e prototype molds?
Kana iwe usina chokwadi chekuti ungasangane sei zvakanaka nezvinodiwa, kana usina chokwadi nezvechitarisiko chechigadzirwa chekupedzisira, unogona kuitisa nyore ongororo uye inodhura kuburikidza nekuratidzira usati waenderera mberi kuumba kugadzirwa.
Makambani mazhinji haana chokwadi chekugadzira zvigadzirwa zvitsva mumatanho ekutanga. Mune ino kesi, pre-kugadzirwa jekiseni muforoma inogona kukubatsira iwe kuona inoshanda nzira uye kana iwe uchifanira kudzokera kudhirowa bhodhi .. Sezvo urikushandisa zvakaderera mutengo zvinhu uye nekukurumidza mashandiro, hauzonzwa uchimanikidzwa nekusasangana neyako zvinodiwa.
Semumwe wevatungamiriri muindastiri, YF Mould ine nyanzvi dzinogona kubata chero mhando yeforoma, kusanganisira prototypes. Isu tinokubatsira iwe kukudziridza inoshanda uye isingadhuri kuongororwa usati waita kune furuu yekupedzisira kugadzirwa. Ichi ndicho chikonzero isu tiri mutungamiri muforoma kugadzira indasitiri. Kana iwe wagadzirira kushanda kumumvuri wepurasitiki muforoma, inzwa wakasununguka kutumira email kana kufonera isu yako tsika chirongwa.
Mould Factory, Tsika Mould, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Prototype Mould Vagadziri, Mould Vagadziri, Plastic Kuisa richigadzirisa,